Le nkonzo online free. Ukubalwa isiseko zephetshana
Ukubala izinto zephetshana isiseko
Cacisa uhlobo isiseko
ukhetho 4 ukhetho 5
Imiqolo tyaba G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nemivalo nkqo V 0 1 2 3 4 5
Iintonga yokudibanisa Z 0 1 2 3 4 5
Netoti ye valve D
Ebubanzini iiplanga formwork T
Ubude iiplanga L
Ububanzi beplanga E
Ubunzima wengxowa enye K
cubic Meshkov 1 meter ngesamente F
IsisBhulu concrete ngokobunzima
isamente : isanti : ilitye bamoya
Ngenisa ixabiso zokwakha
isamente (ingxowa nganye) M
isanti (ngenxa ton 1) P
ilitye bamoya (ngenxa ton 1) B
ibhodi (1 cubic meter) W
izifakelelo (ngenxa ton 1) N
X - ububanzi isiseko
Y - ubude isiseko
A - Ebubanzini isiseko
H - isiseko ukuphakama
C - umgama ukuya iinkosi ibhulorho
S - inyathelo phakathi iikhompawundi
G - Imiqolo tyaba
V - nemivalo nkqo
Z - Iintonga yokudibanisa
Imali efunekayo zesamente ukuvelisa semitha enye cubic ezahlukeneyo besebenzisa izinto eziphathekayo kwimeko nganye.
Oku kuxhomekeke kraca zesamente, grade wacela ikhonkrithi onesiphumo, ubungakanani kunye isisBhulu ngesivingci.
Akukho mfuneko ukuba aphinde indlela ebalulekileyo kuyilo endlwini ukubala ubungakanani yokwakha izinto ngenxa isiseko sendlu.
Ngenxa yeendleko isiseko monolithic uyeza sesithathu ixabiso lendlu.
Le nkonzo iza lula ucwangciso kunye nokubalwa isiseko sendlu. Kuya kukunceda ukubala ubungakanani concrete, nokugxininisa, zixozwe iiplanga isiseko isixhobo komcu.
Ummandla isiseko isiseko (umzekelo, ukuqinisekisa ubungakanani amanzi yokugubungela nelingaphantsi ogqityiweyo)
Isixa abonakalayo isiseko kunye phantsi kwamatye okanye ukugalelwa umgangatho elingaphantsi (ukuba izakuba emnandi, nini, ngenxa iimpazamo ezinesiqalelo-phinda lo khonkrithi ngokwaneleyo)
Yomelele - inani izivalo, ubalo oluzenzekelayo ubunzima baso, esekelwe ubude balo sangqa
Ummandla formwork kwaye isixa imithi cubic kwaye ziingceba
Ummandla zonke imiphezulu (ukuze kubalwe le amanzi elingaphantsi) kunye imiphezulu icala kunye nesiseko
kubalo Added yeendleko izinto isiseko.
Kwale program iya kwenza isiseko umzobo.
Ndiyathemba ukuba le nkonzo iza kuba luncedo kwabo ukwakha isiseko ngezandla zakhe iinjineli-abakhi.
Umlinganiselo nemali zesamente, isanti kunye igrabile yokwenza eziphathekayo banikwa reference olungagqibekanga, njengoko ecetyiswa kubavelisi lwesamente.
Njengoko ixabiso zesamente, isanti, luhlalu.
Nakuba kunjalo, ukwakhiwa ke eziphathekayo ndigqibile luxhomekeke kakhulu amaqhezu ubungakanani amatye nakhandiweyo okanye igrabile, isamente lophawu, iimeko zayo amathayara kunye nokugcinwa. Kwakusazeka ukuba ngexesha kuyoluka isamente yokugcina ulahlekelwa iimpawu zayo nomgangatho zesamente yonakaliswa ngokukhawuleza kakhulu kule ukufuma ephakamileyo.
Nceda qaphela ukuba iindleko zesanti ne zegrabile ichazwa yeprogram ton 1. Abathengisi yazise ixabiso ngalinye cubic meter intlabathi, amatye nakhandiweyo luhlalu.
Ingakanani intlabathi ixhomekeke imvelaphi yayo. Umzekelo, intlabathi umlambo inzima kunezo umsebenzi.
1 cubic meter intlabathi nobunzima 1200-1700 kg ngokomyinge - 1500 kg.
Luhlalu kwaye kunzima ngamabhodlo. Ngokutsho imithombo eyahlukeneyo 1 cubic ubunzima imitha ukususela 1200 ukuya 2500 kg kuxhomekeke kubungakanani. Inzima - ngaphezu embiweyo.
Ngoko ubale iindleko ton zesanti ne zegrabile nganye kusenokufuneka ucole okanye nabathengisi.
Nangona kunjalo, ekubaleni nangoku kuyanceda ukuba wazi ukuba uqikelelo lweendleko zokwakha izixhobo okugcwalisa yokuzimela. Musa ukulibala omnye ucingo ukuukhanyiswa anganithi, izikhonkwane okanye izikrufu ngenxa esingophuki, ukunikezelwa zokwakha, iindleko kusimbiwa kunye zokwakha umsebenzi.